सिड्नी मेट्रोले सञ्चालन गर्यो प्राज्ञिक लेखन सेमिनार - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सिड्नी मेट्रोले सञ्चालन गर्यो प्राज्ञिक लेखन सेमिनार
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०७२, मंगलवार August 5, 2015
सिड्नी, अष्ट्रेलियाका नेपाली व्यवासायीहरुले भर्खरै सञ्चालनमा ल्याएको सिड्नी मेट्रो कलेजले प्राज्ञिक लेखनमा सेमिनार सञ्चालन गरेको छ ।शिव श्रेष्ठ , सो कलेजका सन्चालक मध्येका एक असनेपालन्युजलाई बताउंछन् कि हामी समुदाय र संचारकर्मि विच यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढाइ रहेका छौ । यसको निरन्तरता रहने छ ।
एकेडिमिक राइटिङ स्किल बढाउन र सोको कन्सेप्टका बारेमा सुसूचित गराउन सेमिनार आयोजना गरिएको कलेज सञ्चालकहरुले जानकारी दिएका छन् । सेमिनार अगष्ट २ आइतबार सञ्चालन गरिएको हो । १६ वेन्टवर्थ एभिन्यु सरी हिलमा रहेको कलेज भने आगामी अगष्ट १२ बाट मात्रै सञ्चालमा आउने छ । दुई साता अघि नेपाली अभिभावकहरुले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका थिए । कलेजका नयाँ विद्यार्थी, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी गर्दै गरेका विभिन्न विधाका १३ जना विद्यार्थीहरु सेमिनारमा सहभागी भएको बताइएको छ ।
सहभागीहरुलाई सिड्नी मेट्रो कलेजका डाईरेक्टर कम्प्लायन्स र स्ट्राटेजिक प्लानिक तथा विश्व विद्यालयका प्रोफेसर डा कृष्णकुमार श्रेष्ठ र कलेजका हेड अफ बोर्ड डाइरेक्टर डा. हेमन्त ओझाले संयुक्त रुपमा प्रशिक्षण दिएको ओझाले जानकारी दिए । प्रशिक्षार्थीहरुले सेमिनार निकै उपयुक्त भएको प्रतिक्रिया दिँदै कलेजले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अष्ट्रेलियामा तेस्रो चार्टर्ड उडान गर्दै नेपाल एयरलाइन्स
काठमाडौं । काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले तेस्रोपटक अष्ट्रेलियामा […]
कोरोना भाइरस प्रभाव : अस्ट्रेलियामा मात्र ६ लाख मानिसले रोजगार गुमाए
अस्ट्रेलिया । कोरोना भाइरस संक्रमण र जारी लकडाउनका कारण अस्ट्रेलियामा मात्र ६ लाख मानिसले रोजगार गुमाएका […]
काठमाडौं । चीन सरकारले अस्ट्रेलियाले अब जौ निर्यातमा ८० प्रतिशत सीमाशुल्क दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। चीनको […]
अष्ट्रेलियामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ सय नजिक, कस्तो छ पछिल्लो अवस्था ?
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अष्ट्रेलियामा ९७ जनाको मृत्यु […]
अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ हजार ९४१ पुग्यो
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हालसम्म अष्ट्रेलियामा ९७ जनाको […]
अष्ट्रेलियामा एकैदिन २१ जनामा कोरोनाको संक्रमण
अष्ट्रेलिया । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अष्ट्रेलियामा हालसम्म ९७ […]
नेपालमा थप २१ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज, निको हुनेको संख्या १७६ पुग्यो
कोरोना संक्रमितको संख्या ५६ लाख नाघ्यो, २४ घण्टामा ९४ हजार नयाँ संक्रमित थपिए
वर्तमान संकट र समाधान ११ सूत्रहरु – नागरिक फाउन्डेसन
बुद्धका १० उपदेश: जसले मानिसको जीवनको अर्थ, जीवनप्रतिको दृष्टिकोण बदलिदिन सक्छ
कोरोना भाइरसको संक्रमणले आँखामा असर गर्छ ? संक्रमण निको भएपछि आँखाको समस्या !